LG Mobile wuu xirmay, waxaana igu qaatay xusuus - SmartMe
Waxa daabacay	 Julian
Waxaa ku xirtay burcad ... Ama halkii, iyagu iyaguba wey ahaayeen. Mid ka mid ah soo saarayaasha taleefannada casriga ee waaweyni hore ayaa qallalay sannadba sannadka ka dambeeya ugu dambayntiina gebi ahaanba wuu libdhay dhawaan la dhaqaysameynta boos badan oo Shiinaha ah. Dabcan, qeybta mobilada ee Kuuriya LG, LG Mobile, ayaa laga hadli doonaa (TV-yada iyo kuwa kale way sii wadi doonaan sidaas). Maxaa ka dhigay taleefannada LG inay istaagaan? Joogto la'aan, cusboonaysiin la'aan iyo naqshad qariib ah iyo xulashooyinka softiweer.
Tani waxay ahayd kiis sanadihii la soo dhaafay, hore LG waxay lahayd dhowr moodooyin xiiso leh iyo waxyaabo badan oo hal abuur leh. Warku wuxuu noqon karaa mid xiiso leh, laakiin ugu yaraan aniga shaqsiyan, markaan dooranayo taleefanka casriga ah, waxaan filayaa mid dhammaystiran oo dhammaystiran, oo aan sanduuq ku dhegganayn "khayaanada dilaaga ah". LG waxay lahayd ikhtiyaarro badan oo xiiso leh, laakiin markaan isku dayo inaan xasuusto wax dareenkayga soo jiitay sannadihii ugu dambeeyay ee dhibaatadooda, waxaan haystaa dhibaato weyn. Waxaa laga yaabaa in taxanaha LG V, ay ugu wacan tahay awooda fiidiyowga (waxaan ku sigtay inaan xayeysiiyo xayeysiinta), ama LG Wing, oo sii ahaan doonta kii ugu dambeeyay ee soo jeedintooda, kaasoo helay sumcad ka hor inta aan la demin laydhadhka. Intaanan xasuusta aadin, hal erey oo dheeri ah oo ku saabsan doorashada LG, intaa kadib waxaad ku arkeysaa waxoogaa run ah halyeeyga reer magaalka ah oo ah in qof reer Kuuriya ah oo waxbarashadiisu liidato oo aan shaqo ka helin Samsung uu aaday LG.
Miyaan xushay xulashooyin soosaarayaal qariib ah Intii lagu jiray xilliyada taleefannada iOS ama antek ka dibna taleefannada casriga ah ee ugu horreeya, naqshadayntu badanaa way qurux badnayd. Waxaa jiray naqshado badan oo xiiso leh, agab iyo fikrado ku saabsan sida taleefannada casriga ahi u muuqan karaan. Kadib way ka sii dartay oo soo saaruhu wuxuu ku dhibtooday dhinac kasta isagoo isku dayaya inuu la iftiimiyo wararka halkii uu ka keeni lahaa alaab "dhammaystiran". Tan waxaa laga arki karaa taxanaha caanka ah ee G iyo V. Markii aan doortay Samsung Galaxy S2017 sanadkii 8, LG waxay lahayd nooca G6. Ma jiro shaashad OLED ah, 32GB oo saldhigga ku jira, hore aan isu dheellitirnayn iyo processor-kii sanadkii hore.
Oh, ma fiicna ...
Ka dib markii aan soo galay uruursanaanta iyo godadka shaashadda, si loo gaaro dhammaystirnaan "aan xaddidnayn" LG had iyo jeer waxay dooraneysay indentations-kii ugu xumaa ee jiray. Tani waxay si cad uga muuqataa LG Velvet-kii udambeeyay - dhexdhexaad ah oo iska dhigay inuu yahay calan (sida qiimaha noocan oo kale ah) oo diiradda saarey naqshad qurux badan (xitaa magaca waa in la xoojiyo), hadana waxay leedahay cilad aad u fool xun. sida telefoonka muhiimka ah.
LG Wing - nabad galyo
Cusboonaysiinta la'aanta ayaa ahayd mid iska caadi ah muddo dheer xitaa taleefoonnada waaweyn ee Android, laakiin tan LG waxay ku dartay muuqaal iska caadi ah oo fool xun. Laga bilaabo astaamaha, iyada oo loo marayo shaqeynta xawaaraha hawlgalka - kursigu ma istaagin, oo tartanka Shiinaha ayaa sii fiicnaanayay oo ka sii fiicnaanayay. Sababtoo ah la'aanta joogtada ah ee ku darista iyo ka saarista shaqooyinka jiilalka dambe ee moodooyinka LG, si adag looma oga waxa iibsashada LG ee soo socota loola jeedo. Waxoogaa la mid ah Oppo oo hadda ku jira calaamadaha Find X, halkaas oo jiil kasta oo soo socdaa uu gebi ahaanba ka baxsan yahay jidka - oo keliya miisaan ballaaran.
LG wuxuu sii daayay ku dhowaad 1000 nooc iyo noocyada taleefannadiisa sanadihii la soo dhaafay, markaa waad qori kartaa si aan dhammaad lahayn, laakiin hadda illaa heer. Halkan waxaa ah liis tusaalooyin ah oo aan fursad u helay in aan xirto dadaallada maalinlaha ah sannadihii la soo dhaafay:
Laga soo bilaabo moodeelladii ugu horreeyay ee aan lahaa, marwalba waxaan fiirin jiray xiisaha LG, laakiin waxaan go'aansaday qaabkoodii ugu horreeyay qiyaastii 2009 waana LG KM380 (ha ka cabanin magacyada taleefannada casriga ah maanta). Waxay ahayd tusaale in soo saaraha Kuuriya uu isku dayay inuu la tartamo Sony iyo taxanahooda muusikada ee Walkman. Astaamaha lagu kala garto waxay ahaayeen cabir isu eg oo qurux badan, naqshad xeel dheer. Dabool xiran, oo shaqadiisu ahayd inuu qarxiyo kumbuyuutarka. Waxay u oggolaatay jawaab wax ku ool ah oo wicitaannada ah iyo KM380 inay iska dhigaan qaabkii ay u caansanaayeen ciyaartoydii MP4 ee xilligaas. Waxaa jira dhowr animations in software si ay u xoojiyaan in ay tahay telefoonka music a. Waxaan ku xasuustaa tayada codka. Khasaaruhu wuxuu ahaa tayada guryaha iyo batteriga, taas oo, sababo la taaban karo, ay ku xigto u wareegitaan sagootin ah… Samsung Avila dhawr bilood ka dib.
In kasta oo batteriga uu jiro, Avila iima shaqeyn, markaan ogaaday inta qof, iyo sida loogu riixay qolka fadhiga, waxaan helay fursad aan ku booqdo LG Arena. Waxaan sanado badan ka hor ku eegay Arena isha hunguriga. Arena wuxuu ahaa bahal u qalma waqtigiisa. Waxay iska dhigaysay inay tahay taleefan casri ah, laakiin ma ahayn. Shaashadu waxay ahayd 3,2 inji (iPhone-ka wuxuu ahaa 3,5). Guryaha qalinka ah, casriga casriga ah iyo xiisaha xiisaha leh ee loo yaqaan 'S-Class'. Waxay ku saleysneyd afar desktops - dhinacyada kuubbada, oo lagu dhejin karo aalado. Anigu kuma aanan raaxaysan muddo dheer maxaa yeelay waa waqtigii xitaa nooc asal ah oo shirkaddan ah ...
Munaasabadda hordhaca ah ee 'Avatar', LG waxay sii deysay jiilkii labaad ee taxanaha Shukulaatada. Midka koowaad waxaa lagu kala soocay nashqad qurxoon oo leh iftiinka gadaal ee furaha cas. Midka labaad wuxuu ka koobnaa laba nooc oo kala ah BL20 iyo BL40. Waxay umuuqdeen inay isku egyihiin, laakiin BL20 wuxuu ahaa slider-taabasho taabasho ah iyo BL40 wuxuu ahaa sheeko ka duwan. 4-inji taabasho taabasho leh saamiga dhinac 21: 9 ah. Layaab ma leh in hantidiisa "shineemo" la dalacsiiyay. Waxay ahayd xalka asalka ah ee dhawaanahan ay Sony isku dayeysay inay ku dhex dhacdo taleefannada noocan oo kale ah. Tan awgeed, waxaan leenahay shaashad ballaaran oo ku jirta guryo gacan qabad leh. Isku xidhka 'Class Class' xitaa wuu sii horumarsanaa. Kaamiradu waxay xilligaas lahayd 5MPx oo dawakhsan, jaakad dhegaha la gashado, booska kaarka xusuusta, sidoo kale waxaad ka saari kartaa batteriga… Waqtiyadaas bay ahaayeen. Wuxuu umuuqday mid cajaa’ib leh, xoogaa ayuu gooyay, laakiin androids-ka aad buu uga xumaa waqtigaas. Waxay ahayd qaabka LG ee aan ugu dheereeyay. In ka badan sanad iyo badh. Nasiib darrose, shaashadda ayaa ugu dambayntii jabtay, beddelkeeduna ma sahlaneyn ... BL40 sidoo kale wey sameysay xayeysiin qosol badantaas oo ay tahay inaan ku taliyo munaasabaddan. Intaa ka dib, waxay ahayd waqtigii taleefankii ugu horreeyay ee… HTC HD7.
Iyo kuwa kale…
Si kooban oo ku saabsan kuwa kale ee aan ku tijaabiyay:
LG Swift 7. Waqti ay Windows Phone u muuqatay inuu yahay ciyaaryahanka saddexaad ee suuqa, tani waxay ahayd dalabkii ugu horreeyay ee LG. Waxyaabo badan ayuu sifiican u qabtay. 16GB xusuusta markii tartamada badankood kaliya ay bixiyeen 8, batari wanaagsan laakiin muuqaal yar oo liita. Waxaa loo yaqaana seddex magac si looga dhigo mid qosol badan: Swift 7, Optimus 7 iyo E900, yaa jecel waxa.
LG GD330 - xiiso leh sida kuwa kale ee LG sliders aad u fiican oo si fiican u shaqeeyey.
LG Cookie - waxay ahayd wax soo saar ay tahay in lagu karbaasho. Wax badan mawduuca.
LG KS365 - waa khalad aniga ii gaar ah, laakiin waxay ahayd taleefoon loogu talo galay dhalinyarada qaabka "isgaarsiinta", yacni kuwa qora farriimo fara badan. LG-kii ugu dambeeyay ee aan inbadan isticmaalay.
LG Swift wax baa jira - i cafi, laakiin waxay ahayd taleefan casri ah oo raqiis ah oo wanaagsan, celcelis ahaan ku filan inuu noqdo mid laga xumaado in la hadlo, laakiin 5 sano ka hor waxay ku sii jirtay xusuustayda sababtoo ah Android 5, oo ahayd noocii ugu horreeyay ee nidaamkan, kaas oo si uun buu u eegay oo u siiyay in la isticmaalo. LG-na way qaraqantay maxaa yeelay biyo ma ahayn ...
Iyada oo leh moodallo badan iyo hal-abuurnimo, tusaalaha ugu dambeeya waa in ugu yaraan loogu yeeraa LG RIP ... Waxaan la yaabanahay waxa uu ku dambeyn doono LG qaybaha kale.